Deeq La Gaarsiiyaya Agoon iyo Dad kale – Sydvästsomaliska Riksförbundet I Sverige (SRS) – Dalladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Sweden
03:29: AM Friday July 1, 2022
Deeq La Gaarsiiyaya Agoon iyo Dad kale
Posted on June 27, 2017 at 13:47 by sydvast.som
Waxaa taariikdha markay ahayd 24 sabti 2017 la gaarsiiyay cunto iyo dhar ciid ilaa iyo 100 qofood oo ay ka mid ahaayeen (70 caruur oo agoon oo laga soo xulay qeybaha kala duwan ee magaalada Baydhabo kuwaas oo daddooda u dhaxayso 7-10 jir). Waxaa kaloo kaalmadaas la gaarsiiyay ilaa iyo 30 qoys oo ka soo jeeda bulshada Eylo oo magaalada Baydhabo oo ayagana loo qeybiyeyey sadaqo cunto iyo fitrada isugu jira.
Deeqdaas waxaa soo dhiibay muxsiniin degan dalka Sweden iyo waar ka tirsan jaaaliyadda KGS ee Sweden. Arintaas oo ay Dalladda KGS ee Sweden uga mahadcelinayso dhammaan dadka suurto geliyay sadaqadaan qiimaha badan iyo dhammaan intii ka qeyb weyn ka qaadaday howshaan.
Waxaa kaloo deeqdaas qeybinteeda ka qeyb qaatay, sida diyaarinta iyo xullidda dadka la gaarsiiyay, Hay’adda Tawaafiq Foundation ee Magaalada Bayhabo.
OBS: Cillad dhinaca internetka darteed ayaa warbixinta ay soo daahday. Waxaana sugeynaa warbixo dheeraad ah, oo aan idin soo gudbin doono.
Dalladda KGS Sweden
27 Juun 2017
Presskonferens från Sydvätsomaliska Riksförbundet I Sverige (SRS)
Posted by sydvast.som - July 25, 2015 0
Presskonferens från Sydvästsomaliska Riksförbundet I Sverige (SRS) Datum: 23 juli 2015 – Örebro, Sverige Syfte: Massaker , utbredd av plundring…
150 IDP Families Received food Ration in Baidoa
Posted by sydvast.som - April 20, 2017 0
https://youtu.be/cU4RFUoCmoQ About 150 IDP families received food ration in Baidoa from Southwest Association in Sweden (Sydvästsomalisak Riksförbundet i…
Go’aanadii Ka Soo Baxay Shirkii Dalallada KGS ee 2016 – Göteborg
Posted by sydvast.som - December 5, 2016 0
Go’aanadii Ka Soo Baxay Shir Sanadeedka 2016 ee Dalladda Koonfur Galbeed Sweden ee Magaalada Göteborg, Sweden. Shir sanadeedka dalladda KGS…